Previous “दशैं तिहार” कोशेली आयो!
Next पल शाह, नजिर हुसेन र स्वस्तिमा खड़का अभिनित “मुखैमा राम राम बगलीमा छुरा” बोलको गीत सार्वजनिक
गीतहरु, म्युजिक भिडियो, यूटूब हिट्स
नेपाली चलचित्र जगतका महानायक राजेश हमाल भर्खरै सार्वजनिक भएको “मन्जरी” बोलको लोक गीतमा देखीएका छन। सो गीत यूटूबमा २ दिनमा सात लाख भ्यूज पुगी चर्चामा छ।
फ़िल्मी क्षेत्रबाट धेरै कलाकारहरुलाई अहिले चलचित्र उत्पादन लगभग सुन्य रहेको अवस्थामा गीतहरुमा देखिनु त सामान्य भएको छ। तर महानायक नै म्यूज़िक भिंडियोंमा आउनुले पनि राम्रो संकेत गरेको हो कि?! यूटूबमा आएका गीतहरुले व्यापार यस्तो लकड़ाउनको समयमा पनि कसरी गरे? यूटूबको रोयल्टीले सबै धान्न सक्ला? जे होस, चलचित्रका चर्चित अभिनेता, अभिनेत्रीलाई देखेपछि फ़िल्म हेर्ने लत पनि कम होला नि दर्शकहरुको!
“मन्जरी” बोलको यस लोक गीतमा देवी घर्तीको स्वर र प्रकाश पराजुलीको स्वर एवं संगीत छ भने नवराज पन्तको शब्द रहेको छ। म्यूजिक भिंडियोंमा राजेश हमालको साथमा वर्षा सिवाकोटी र प्रकाश सपूतले अभिनयमा साथ दिएका छन भने निर्देशन देवेन्द्र बब्लुले गरेका हुन।
Barsha Siwakoti Devendra Bablu Devi Gharti Navaraj Pant Prakash Parajuli Prakash Saput Rajesh Hamal
फ़िल्म “हिजो आजका कुरा” को गीत माया जदौ चर्चामा, फ़िल्म वैशाख १२ मा आऊने ।